Eswatini yakabatwa pakati peTaiwan neChina zvinoreva njodzi huru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Eswatini yakabatwa pakati peTaiwan neChina zvinoreva njodzi huru
African Tourism Bhodhi • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • Taiwan Kupwanya Nhau • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kana humambo hune rugare muAfrica hwuri kuwedzera kusagadzikana panogona kunge paine chikonzero chakafara. MuHumambo hweEswatini panogona kunge paine kupesana kweChina Taiwan. China inoda hurumende nyowani muEswatini - uye zvino inogona kunge iri nguva yekuti hofori yechikominisiti iite mashiripiti.
Mamiriro ezvinhu akadzikama parizvino muguta guru reEswatini Mbabane nezvitoro zvakavharwa uye migwagwa isina vanhu inogona kunge iri runyararo pamberi pemhepo yakanaka.
Sekureva kwesimba rekunze mauto anounza zvombo kuEswatini Capital.
Kunze kwevaratidziri vadiki vanoda kuwana simba rakawanda pamusoro penyika, panogona kunge paine simba rakakura rinoshanda mamiriro kumashure. Iri simba rinogona kunge riri Peoples 'Republic of China.
Walter Mzembi, aimbova gurukota rezvekunze muZimbabwe uye anoziva nezve geopolitics mu Africa anofunga, China ine zvikonzero zvakawanda zvekuona Mambo weSwatini aenda.
Haisi tsaona kuti United States iri kuvaka imwe yemamiriri makuru pasi rose munyika diki iyi Eswatini. Chikonzero chacho chaicho chinosanganisira Taiwan neChina.
Mubvunzo wakakura ungave China uye chishuwo chesimba renyika iri kudzora simba repurovhinzi yakatiza, Taiwan, inozivikanwawo seRepublic of China.
Hurumende nyowani muEswatini ichachinja kubva pakuziva iyo People's Republic of China pamusoro peRepublic of China, inozivikanwa seTaiwan. China yaizoda izvi - uye zvakakosha kune iri simba remakomunisti. Eswatini ndiyo yega Nyika yeAfrica ine hukama hwehukama neTaiwan.
Naizvozvo zvinogona kunge zvisina kuitika kuti Communist Party yeEswatini nhasi yasimbisa kuti Mambo, Mambo Mswati III vatiza nyika yavo vakati vanonzi vari muJohannesburg, South Africa. Kuita mutungamiriri wehumambo anoramba iyi.
Mambo vanonzi vakasiya pakati pekuratidzira kwekutsigira demokrasi kuchitsvaira humambo hwevanhu 1.16 miriyoni mumazuva mashoma apfuura.
Eswatini inhengo yeUnited Nations, Commonwealth of Nations, African Union, Common Market yeEastern neSouthern Africa, neBotswana Sangano reSouthern Africa Development Community.
Peoples Republic of China inozivikanwa kuva nesimba rakakura pamusoro peSadc. Vamwe vanoti Southern African Development Community yakarasikirwa nekukosha, ichigumbura China.
Kune hurumende yeChinese, zvakanakira kusangana ne Africa zviri pachena. China yakashandisa kudyara kwayo muAfrica kuwana mukana kune zviwanikwa zvakawanda zvekondinendi, zvinosanganisira oiri, simbi dzinokosha, uye zvicherwa zvakakosha mukugadzirwa kwetekinoroji dziri kubuda senge mabhatiri emagetsi emagetsi.
Africa inomiririra musika unokwezva wemakambani ekuvaka eChina, ayo anotarisana nekuwanda kwemba kumba uye vanoshuvira kuwana zvitoro zvitsva.
Nekudaro, kazhinji kazhinji mabhenefiti emapurojekiti aya haaenderere kune vakawanda vevashandi vemuAfrica. Mari yekuChina yemapurojekiti eAfrica ezvivakwa inowanzouya nezvinodiwa kuti nyika dzinokwereta dzisarudze vatengesi veChinese, zvichiita kuti zviome kune dzimwe nyika, kusanganisira United States, kutora chikamu muzvirongwa zvemuzvivakwa zvemuAfrica.
Beijing yakakwanisawo kuwedzera kubatirana kwayo mu Africa mukutsigira iyo
danho repasi rese. Semuenzaniso, China yakashandisa huvepo hwayo muAfrica kupatsanura Taiwan nenzira. Nyika dzese dzeAfrica, kunze kweEswatini, dzakaziva Beijing pamusoro peTaipei. Vatungamiriri vemu Africa vakaratidzawo kutsigira zvirevo zveBeijing muSouth China Sea uye vakataura zvirevo zveruzhinji vachitsigira Beijing panguva yekuratidzira kwe2019 kuHong Kong.
Mhedzisiro ye Africa yakavhenganiswa. Ipo Africa iine kudiwa kukuru kwe
zvivakwa izvo zvinoramba zvisina kuzadzikiswa, mapurojekiti ayo mari yeChina inowanzo sarudzwa kuburikidza nenzira dzakajeka, kuwedzera matambudziko ehuori. Zvakare, mari yeChina inouya nemutengo, zvichibatsira mukuwedzera kusingagadzirisike kwechikwereti munyika zhinji dzeAfrica.
Aya maitiro ekukweretesa akakonzera kupomedzerwa kwehukoloniyasi nyowani, uye mukumuka kwekudzikira kwehupfumi kwakakonzerwa nekuparara kweCOVID-19, nyika dzemuAfrica dzave kuramba dzichidaidzira kubvisirwa chikwereti.
China kusvika parizvino yakanyarara kune izvo zvikumbiro, zvichimutsa mubvunzo wekuti iyo
United States nevamwe vanopa rubatsiro kune dzimwe nyika vachasara vachitevedzera bhiri iri
Ipo China yakashambadzira hutano hweveruzhinji mu Africa panguva ye
COVID-19 denda, vazhinji vemuAfrica havana chokwadi uye varatidza kunetsekana kuti michina yakapihwa neChina inogona kunge iri yemhando yepamusoro.
Humambo hweEswatini ndeimwe yenyika gumi neshanu dzinoziva Republic of China, inozivikanwawo seTaiwan Ndiyo chete nyika muAfrica isina hukama hwehukama nePeople's Republic of China.